ပရိတ်သတ်တွေဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တွင် rocker ကျမ်းပိုဒ်တုံ့ပြန် - လူတွေ - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင် "ဒီပရိတ်သတ်တွေဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တွင် rocker ကျမ်းပိုဒ်တုံ့ပြန် - လူတွေ
ပရိတ်သတ်တွေဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တွင် rocker ကျမ်းပိုဒ်တုံ့ပြန် - လူတွေ
Tele RELAY တစ်ခု 13 စက်တင်ဘာလ 2019
ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ သင်တစ်ဦးကမိုဘိုင်း device ကိုပေါ်ဤအကြောင်းဓာတ်ပုံများကြည့်ရှုဒုက္ခရှိခြင်းလျှင် .
ပရိသတ်တွေစက်တင်ဘာလအတွက်အသေသတ်ခြင်းကို Eddie ငွေ, သေမင်း၏ဂီတညည်းတွားဆင်နွှဲဖို့လူမှုရေးကွန်ရက်များပေါ်တွင်ပြောင်းရွေ့ပါပြီ။ 13 ။
Eddie ငွေ RIP ပင်ဟိုးမား Simpson ပရိတ်သတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
- အန်ဒီ (@Andy_Westfield) အဆိုပါ 13 စက်တင်ဘာလ 2019
ငြိမ်းချမ်းစွာအိပ်စက်နိုင်စေသော်ဝ် လှံတံ  ပို. ပို. Bay Area #eddiemoney ငါဖြစ်ကောင်း Eddie 20 ကြိမ်မြင်ကြပြီ။ ဤသူသညျဂလားပင်လယ်အော်တစ်ဒဏ္ဍာရီဖြစ်ခဲ့သည်။ Eddie ကယ်လီဖိုးနီးယားတစ်လျှောက်လုံးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်သီချင်းများနှင့်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာဖျော်ဖြေပွဲရှိခဲ့ပါတယ်။ အစဉ်မပြတ်ငါထင် ... https://t.co/4VIZWKK7lt
- ဒင်း Delray (@deandelray) အဆိုပါ 13 စက်တင်ဘာလ 2019
rocker ငါသည်ငါ့အကြိုက်ဆုံးသီချင်းဆိုများထဲမှမှတ်တမ်းတင်ဘို့အစဉ်အမြဲတန်ဖိုးထားလိမ့်မည်ဟုလျှော့တွက်, Eddie ငွေအသေခံ၏လေ့လာသင်ယူ 10 အကောင်းဆုံးကြောပိတ်ဆို့မှု, "ကလေးတွင်ကိုင်ထားပါ" ကိုဝမ်းနည်းဖွယ် - ငြိမ်းချမ်းရေးဆုခုနှစ်တွင်ရော့ခ်မစ္စတာ Mahoney ! #eddiemoney pic.twitter.com/wnv2f9TNHl
- Dano Music🎧 (@danopaquette) ခစျြ အဆိုပါ 13 စက်တင်ဘာလ 2019
Eddie ငွေကိုချပြတင်းပေါက်ထားရွှင်လန်းစွာသီချင်းဆိုရန်သင့်အားလိုအပ်ကြောင်းသီချင်းတွေကိုရှိပါတယ်။ RIP #EddieMoney pic.twitter.com/wC17VRQr8e
- Rasel Talukder (@ RaselTalukder13) အဆိုပါ 13 စက်တင်ဘာလ 2019
. ။ သူ့ကိုငါအကြိမ်ပေါင်းများစွာတွေ့ဆုံများ၏အပျြောအပါးရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီတော့ underrated နှင့် Fame R & R ၏ခန်းမထဲမှာဖြစ်ထိုက်တန်ပါတယ် ။ Pic.twitter.com/JXuyRuKQSk
- ဒါဝိဒ်သည် LaGreca (@ davidlagreca1) အဆိုပါ 13 စက်တင်ဘာလ 2019
သင်၏မျက်စိထဲမှာမတ်ေတာသညျ #EddieMoney # 1980s # 80s https://t.co/Lyz9egI4Db https: // t ကို။ ပူးတွဲ / 95evMYWn2H
- Ajay Gohil (@AjayRGohil) အဆိုပါ 13 စက်တင်ဘာလ 2019
ယနေ့မူကားယောက်ျား၏ဘုန်းအသရေအတွက် Shakin ပါလိမ့်မယ်။ Eddie rip ။ 1945 @ImEddieMoney #EddieMoney image.twitter.com/zvHPTagNku
- gimmejams🤘 (@ 80sjams) အဆိုပါ 13 စက်တင်ဘာလ 2019
။ Eddie ငွေ: Farewell ငါ၏အဟောင်းများကို PAL မှ @ImEddieMoney ။ တစ်ဦးကအကြီးအဟောင်းများကိုကျောင်းက rocker နှင့်စစ်မှန်သောလူကြီးလူကောင်း။ ငါသည်သူ၏မိသားစု, သူငယ်ချင်းများနှင့်ပရိတ်သတ်များဖို့အကောင်းဆုံးအလိုရှိ၏။ ဤတွင်ပိုစတာ @SiriusXM ငါသည်သူ၏နောက်ကျော 2007 နှင့်အတူဧည့်ခံကြောင်းအနုပညာရှင်လျှို့ဝှက်။ အဆိုပါငွေက Man မှနှုတ်ဆက်! #EddieMoney pic.twitter.com/PujFRHocHw
- Lou အဘိဓါန် Brutus (@LouBrutus) 13 septembre 2019
- Lisa.T (@gonzigirl) အဆိုပါ 13 စက်တင်ဘာလ 2019
ငြိမ်းချမ်းစွာအိပ်စက်နိုင်စေသော်ဝ် #EddieMoney ပရဒိသုရန်သင့်လက်မှတ်ကိုထိုးကြိတ်။ တွင် Rock ။ https://t.co/9WUmHJxj9N
- ချဒ် Rommel (@ChadRommel) အဆိုပါ 13 စက်တင်ဘာလ 2019
ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးရှိုးငါ့မွေးနေ့မတိုင်မီ 13e တစ်ခုမှာ။ # EddieMoney pic.twitter.com/LOFbPTtPDJ
- မဿဲ / အော်တိုဖိနပ် (@automaticshoes) 13 septembre 2019
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်အရာကြွင်းလေ #EddieMoney ငါသည်ငါ့ပုံနှစ်တာကာလအတွင်း "ကလေးတွင်ကိုင်ထားပါ" ကိုကြားဘယ်လိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာမပြောနိုင်ပါ။ pic.twitter.com/mzxFlmrZai
- JT O'Malley (@jt_omalley) အဆိုပါ 13 စက်တင်ဘာလ 2019
Yannick နောဧသည်: ဘယ်မှာ
PHOTOS ။ မင်းသမီး Emma Smet 22 နှစ်ပေါင်းကျင်းပ: Estelle Lefebure, လော်ရာ Smet, Darina Scotty-Vartan မက်ဆေ့ခ်ျများတင်ဒါစေခြင်းငှါ
Kate Middletonaeu le cœur brisé etainsisté pour aider les orphelins hier soir au Pakistan
အိန္ဒိယ - ပထမဆုံးသောမီးရထားလမ်းသည် Tejas ခရီးသည်များကိုနှောင့်နှေးစေရန်ပေးချေလိမ့်မည် အိန္ဒိယသတင်း
လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင်6,282